स्वास्थ्य जिवनशैली – ईमेची डटकम
हामी मानव जातीले यति धेरै अधिकार पाएका छौं कि जुन पशुपंक्षी तथा बनस्पतिहरुले पाउन सकेका छैन । यति धेरै अधिकार भएर पनि मानिस किन दुखी छ ? हामी किन यति धेरै निराशाको बन्दी भएका छौ ? हामी मानिस मात्रले पाएको विशेष अधिकार हो , छनोटको अधिकार। “we human beings are free to make our own […]
यदि तपाईंको अचानक छाती पोल्यो दुख्यो सिल्का हान्यो, सास फेर्न गार्हो भयो, मुटुको धड्कन बढ्यो आदि भयो भने सुरुमा लौ मलाई हर्ट एट्याक भयो क्याहो, म त मर्छु कि क्याहो जस्तो लाग्न सक्ला। यस्तो बेलामा समयमै अस्पताल जाने सुबिधा छ भने गएर देखाउनुस। यदि उपाय छैन भने निम्न कुरामा ध्यान दिनुस। छातीको भागमा बाहिरी छाला […]
कुनै पनि virus ले (Coronavirus ले पनि) आँफै नयाँ virus बनाउन सक्दैन। त्यसको लागि virus ले पशुपन्छी, मानिस वा अन्य जीवको कोषको भर पर्नु पर्छ। तर शरीरको कोषले जे पायो त्यहि आँफु भित्र छिर्न दिंदैन। त्यहि भएर Virus ले मानबको कोषलाई झुक्याउन आफ्नो शरीरको बाहिरी भागमा रहेको protein तत्व प्रयोग गर्छ जसले गर्दा हाम्रो शरीरको […]
मेचीनगर । लकडाउनका बेला चौबीसै घण्टा सेवा पुर्‍याउन झापामा अत्याधुनिक सुविधासहितका ६ एम्बुलेन्सलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय झापाका अधिकृत जीवन चौलागाईंका अनुसार ती एम्बुलेन्सका चालक कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न पिपीइ ड्रेस (पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्वीपमेन्ट)ले सुसज्जित हुनेछन्। उनले दमक, विर्तामोड, धुलाबारी, कनकाइ, बनियानी र भद्रपुर क्षेत्रका छ एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिए। चालकलाई […]
इमेची डटकम । ५ चैत, काठमाडौं : राष्ट्रसंघीय बालकोष युनिसेफले आधाभन्दा धेरै नेपालीलाई साबुन पानीले हात धुने सुविधा नभएको जनाएको छ । युनिसेफका अनुसार संसारभरका हरेक ५ जनामध्ये ३ जनासँग मात्र हात धुने सुविधा छ । ‘नेपालमा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा धेरैको पहुँचमा साबुनपानीले हात धुने सुविधा छैन’ युनिसेफले भनेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) […]
काठमाडौँ । मङ्सिर सुरु भएसँगै चिसो मौसम सुरु भएको छ । यो समयमा रुघाखोकी, ज्वरो, निमोनिया लगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखा पर्दछन् । समस्या सबै उमेर समूहका व्यक्तिमा देखिए पनि बालबालिका बढी जोखिममा पर्छन् । बालबालिकाले आफ्नो स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या खुलस्त भन्न नसक्दा चिसो मौसममा देखिने सामान्य समस्याले ठूलो रूप लिन सक्छ । त्यसैले यो समयमा बालबालिकाको […]
नेपाली भान्सामा मसलाको रुपमा प्रयोग गरिने सुकुमेल स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ । यसले ग्यास्ट्रिकबाट रक्षा गर्छ, कोलेस्टेरोल तथा क्यान्सर नियन्त्रण गर्छ, मुटुसम्बन्धी समस्याबाट राहत दिन्छ र रक्तसन्चारमा सुधार गर्छ । यसका साथै यो दाँतसम्बन्धी रोग र मुत्रनली संक्रमणजस्तै सिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस र गोनोरियाको उपचारका लागि पनि फाइदाजनक मानिन्छ । कहाँ पाइन्छ सुकुमेल ? यो खासगरी […]
बिहान उठ्ने वित्तिकै नेपालीहरुको चिया पिउने बानी छ । बिहान ओछ्यानमै चिया पिउने त नेपालीको चलन नै बनेको छ। कतिपय त चिया नपिई नित्यकर्म गर्न सक्दैनन्। अधिकांश नेपालीले बिहान चिया पिउछन्। के बिहान खाली पेटमा चिया पिउनु राम्रो बानी हो ? बिभिन्न अनुसन्धानले खाली पेटमा चिया पिउदा स्वास्थ्यलाई धेरै हानी हुनसक्ने देखाएका छन्। चियामा कैफिन […]
एजेन्सी । कुनै कुनै समयमा मानिसलाई यस्तो समस्या वा रोग आइलाग्छ । जुन सुन्दै अचम्म लाग्ने गर्दछन्। यस्तै घटना चीनमा पनि देखिएको छ। त्यहाँका एक व्यक्तिको मुखको साटो नाकभित्र दाँत उम्रिएका छन्। यो कुराको तब थाहा भयो जब ती व्यक्तिले नाकभित्र कुनै चीज भएका कारण स्वास प्रस्वासमा समस्या भएको थाहा पाए। उनी उक्त समस्या लिएर […]
लाग्ने, वान्ता हुने, ढ्याउ ढ्याउ आउनु, वान्तामा रगत देखिने, कालो दिसा आउने, खाना नपच्ने, तौल कम हुने ,छाती र पेटको बीचको खाल्टो वरिपरि दुख्ने, पेट पोल्नु, भोक हराउनु, अम्लपित बढ्नु, मुख बिग्रिनु, पेट भारी हुनु, आपन वायु बढ्ने आदि लक्षण देखा पर्नु नै यसको लक्षण हो । यसबाट बच्ने घरेलु उपायहरू धेरै छन् ती मध्ये […]